အဘယ်အရာကိုတောင်ကိုရီးယားမှာကြည့်ရှုရန် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | တောင်ကိုရီးယား, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
အချိန်ကနေဒီအပိုင်းရန် တောင်ကိုရီးယား ၎င်းသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူတို့၏နှုတ်ခမ်းများဖြစ်သောဆယ်ကျော်သက်များ၊ လူငယ်များနှင့်လူကြီးများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ယဉ်ကျေးမှု၏ထုတ်ကုန်များသည်လွန်စွာလူကြိုက်များလာခြင်းဖြစ်သည်။
ငါပြောတယ် k-drama, k-pop၎င်း၏ auteur ရုပ်ရှင်ရုံ, ၎င်း၏ gastronomy ... ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုယခုအချို့သောအချိန်များအတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဆွဲဆောင်သောအရာဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ဒီနေ့ ဘာကိုတောင်ကိုရီးယားမှာကြည့်မလဲ
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသည် အရှေ့အာရှ၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင်ရှိသည်၎င်းသည်မြောက်ကိုရီးယား၊ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နေထိုင်ပါ 51 လူဦးရေသန်း အများစုမှာဆိုးလ်မြို့တော်နှင့်၎င်း၏အနီးအနားဒေသများ၌ဖြစ်သည်။ ဤလူ ဦး ရေ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ပြmetရိယာများတွင်စတုတ္ထနေရာတွင်ရှိသည်။
ကိုရီးယားသည်ကွဲပြားခြားနားသောမင်းဆက်များဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ အကြီးဆုံးမှာ Joseon မင်းဆက်ဖြစ်ပြီး ၁၄ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းအထိဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၁၉၁၀ တွင်ဂျပန်လူမျိုးများရောက်လာပြီးကိုးရီးယားများ၌အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးမရှိပါ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်တိုင်းပြည်သည်နှစ်ပိုင်းကွဲခဲ့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ဆိုဗီယက်ယူနီယံအုပ်ချုပ်သောဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။
လက်ရှိကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံကို ၁၉၄၈ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ 50 အားဖြင့်မှတ်သားနေကြသည် ကိုရီးယားစစ်ပွဲ, ကျွန်းဆွယ်၏နှစ် ဦး စလုံးအစိတ်အပိုင်းများအကြားထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု, ဒီနေ့အထိစစ်အေးတိုက်ပွဲတစ်ခုမျိုးအဖြစ်ဆက်လက်။ နှစ်ဆယ်ရာစု၏ဒုတိယပိုင်းအများစုကိုအာဏာရှင်အစိုးရများနှင့်အာဏာသိမ်းမှုများကမှတ်သားခဲ့သည်၊ ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်ခန့်တွင်နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတည်ငြိမ်အေးဆေးလာသည်။
ယနေ့တွင်တောင်ကိုရီးယားသည်ဒီမိုကရေစီထူထောင်ပြီး၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံစင်ကာပူနှင့်ဂျပန်နောက်ကွယ်မှတတိယနေရာမှာကောင်းမွန်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ရှိပြီးပျံသန်းနေသောအင်တာနက်သည်တစ်နေ့တာ၏အမှာစာသို့တင်ပို့သည်။ ဒါရိုက်တာများ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်ဂီတသမားများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသည့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ယဉ်ကျေးမှု။
ငါဟာရန်သူအချို့ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာသိပေမယ့်လူမှုဆက်သွယ်ရေးဘွဲ့ရတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာမီဒီယာလေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်အမြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလို့မရဘူး။ ငါကိုရီးယားရုပ်ရှင်ရုံကိုတကယ်ကြိုက်တယ်၊ ငါနှစ် ၂၀ ကျော်တက်ခဲ့ပြီးပြီ ငါ k-pop တစ် rehash စဉ်းစားပါ ကောင်လေး အနောက်ဘက်မှ '' 80, '90 ကနေ။ နေအောက်မှာအသစ်အဆန်းတွေ၊ မျက်နှာအသစ်များနှင့်ပလတ်စတစ်ထိမှန်သည့် New Block on the New on the Block သို့မဟုတ် Backstreet Boys စတိုင်ရှိဂီတပစ္စည်းများ။
ဘာလဲ k-drama? အလွန်ကောင်းစွာသူတို့ထဲကအတော်များများပြုလေ၏အပြင်ပန်းရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောသရုပ်ဆောင်ခြင်းများအထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများမှဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ သူတို့တွေအများကြီးထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့တွေဟာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေမှာပိုပြီးကစားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်…ဇာတ်ကောင်တွေကနမ်းဖို့အတွက်ဇာတ်လမ်းတွဲရှစ်မှကိုးအကြားယူကြပြီးဘယ်တော့မှလိင်ဘယ်တော့မှမဆက်ဆံကြဘူးဆိုတာကအရမ်းနုံအရင့်ပြီ။ ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်ရမည့်တာရှည်ခြင်းအကြောင်းများစွာဖော်ပြထားသည်။
ဒီတိုင်းပြည်မှာဘာတွေများတွေ့မြင်ရမလဲ။ ငါတို့ပြောနိုင်တယ် တောင်ကိုရီးယားကိုဒေသ ၁၀ ခုခွဲထားသည်Seoul, Gyeongiu, Jeju, Busan, Pyeongchang နှင့် Ulleundo / Doko ကျွန်းတို့ပါဝင်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့နှင့်အတူစတင်သွားကြသည် မြို့တော်ဆိုးလ်။
ဆိုးလ်၏အိုင်ကွန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် Cheongyecheon Streamလှပသောတစ် ဦး မြို့ပြစီး။ ၎င်းသည်လှပသော Cheongye ရင်ပြင်မှစတင်စီးဆင်းပြီးတံတား ၂၂ ခုနှင့်စမ်းချောင်းများနှင့်၎င်း၏စမ်းရေများဖြတ်ကျော်နေသောတံတားများပါရှိသည်။ သဟဇာတ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စည်းလုံးမှုကိုကိုယ်စားပြုသော Cheongyecheon Stream ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းကိုထိုဒေသသည်ဂုဏ်ပြုသည်။ တနင်္ဂနွေနှင့်ရုံးပိတ်ရက်များတွင်ကားမပါ ၀ င်သောကြောင့်သင်ထိုကဲ့သို့သောနေ့၌သင်သွားလျှင် ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသည်။
တစ် ဦး က Focal Point သည်ဖြစ်ပါတယ် ဗီလာစမ်းရေ၎င်း၏မီးအလင်းရောင်နှင့် ၄ မီတာမြင့်သောရေတံခွန်နှင့်အတူ။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တောင်ကိုရီးယားပြည်နယ်ရှစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသောကျောက်ရှစ်ကျောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဆန္ဒဘီးများရှိသည်။ ရိယာတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖွင့်လှစ်သည်။
နောက်ထပ်ခရီးသွားareaရိယာဖြစ်ပါတယ် Insa-dong, စျေးဝယ်နိုင်တဲ့နေရာ။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်လမ်းကြားများရှိသည့်လမ်းတစ်ခုတည်းရှိသည် လက်ဖက်ရည်အိမ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများ။ အနုပညာပြခန်း ၁၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ကိုရီးယားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအချို့ကိုကြည့်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များလည်းအလွန်ကောင်းသည်။ ည ၁၀ နာရီမှ ၁၀ နာရီအထိညနေ ၂း၁၀ နာရီနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့များအကြားစနေနေ့တိုင်းသည်အဓိကလမ်းသည်ကားအသွားအလာကိုပိတ်ထားပြီးဖြစ်လာသည် ကြီးမားသောနှင့်ရောင်စုံယဉ်ကျေးမှုအာကာသ.
ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာခြင်း၊ Bukchon Hanok ကျေးရွာ- ရာနှင့်ချီသောရိုးရာအဆောက်အ ဦး များဟုခေါ်သည် ဟနော့ အဆိုပါ Joseon မင်းဆက်မှချိန်းတွေ့။ ဒီအိမ်တွေဟာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစင်တာများ၊ တည်းခိုခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အချိန်ကုန်လွန်သွားသောရိုးရိုးရှင်းရှင်းခရီးကိုစိတ်စွဲမှတ်စေသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွေပိတ်ထားတယ်။ အနားယူပါ။ သတိထားပါ၊ သုံးနာရီခွဲလမ်းလျှောက်ခရီး, အနည်းဆုံးသုံးရက်မတိုင်မီအင်္ဂလိပ်နှင့်ကြိုတင်မှာကြားထားအောင်။
El Gyeongbokgung နန်းတော် ၎င်းသည်တူညီသောsameရိယာနှင့်မြောက်နန်းတော်ဟုလူသိများသည်။ ဤအဆောက်အ ဦး သည်လှပသောအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၆ ရာစုတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်းခံရပြီးယနေ့အထိအမျိုးသားသမိုင်းကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အင်္ဂါနေ့များပိတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ညနေ ၅း၀၀ နာရီမှညနေ ၅း၃၀ အကြားပိတ်သည်။ ဝန်ခံချက်အရွယ်ရောက်သူနှုန်း5ဝမ်နှင့်ဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်လိုလည်ပတ်မှုရှိပါတယ်
ဆက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်၊ Namdaemun စျေး, 1964 ခုနှစ်တွင်အရာခပ်သိမ်းကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်ရှိရာရိုးရာစျေးကွက်ဖွင့်လှစ်။ စျေးကွက် ညမှာဖွင့်ည ၁၁ နာရီမှနံနက် ၄ နာရီအထိနှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးမှလူများအားဆွဲဆောင်သည်။ အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် အဝတ်အစားများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ၊ တောင်တက်ကိရိယာများ၊ အနုပညာ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ပန်းများကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်ပိတ်ထားသည်
ပိုပြီးဝယ်ယူမှုအဘို့လည်းမရှိ ရှေးအကျဆုံးဈေးဝယ်areasရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့်မြောင်ဒုံခရိုင်။ အလယ်ဗဟိုတွင်အဓိကလမ်းနှစ်လမ်းရှိသည်။ တစ်ခုမှာမြောင်း -Dong မြေအောက်ဘူတာမှဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာ Euljiro မှဖြစ်သည်။ အဝတ်အစားများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ ဖိနပ်များ၊ အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပြင်စားသောက်ဆိုင်များ၊ အစာရှောင်စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ရိုးရာအစားအစာဆိုင်ခန်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပိုပြီးဖက်ရှင်ဝယ်ယူမှုများအတွက်လည်းမရှိ Cheongdam လမ်းသို့မဟုတ် Starfield COEX ကုန်တိုက်။
ပြတိုက်ချစ်သူများအဘို့အရက်ချိန်းနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ် ကိုရီးယားအမျိုးသားပြတိုက် နှင့်၎င်း၏အကြီးအ collection များကို။ အခုထိတော့ဆိုးလ်မြို့တော်ပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဒီတိုင်းပြည်ကငါတို့ကိုတစ်ခုခုကမ်းလှမ်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့သင့်မှာအချိန်နှင့်ဆန္ဒရှိရင်တိုင်းပြည်ကသေးငယ်လို့ပြည်နယ်အားလုံးကိုလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်ဆိုးလ်၊ ဘူဆန်နှင့်ဂျေဂျူးကျွန်းတို့တွင်သာရှိသည်။ ဘူဆန် အခြားမြို့တစ်မြို့လား၊ Busan ကို Train to the ၎င်း၏ဖုတ်ကောင်များနှင့်ရုပ်ရှင်ကိုသတိရပါသလား။
ဘူဆန်သည် ဆိပ်ကမ်းမြို့ ယင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီးဖြစ်သော။ အထူးသဖြင့်၎င်း၏နှစ်စဉ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည် Busan အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်, BIFF ။ ထို့အပြင်၊ Haendae သဲသောင်ပြင်နှင့် Gwangalli သဲသောင်ပြင်၊ Yongdusan ပန်းခြံနှင့် Jagalchi စျေးများရှိသည်။ ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဆိုးလ်မြို့ကနေကျည်ဆန်ရထားနဲ့တိုက်ရိုက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိပြီးသား။ အကယ်၍ သင်သည်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကျော်ရန်ရဲဝံ့ပါက၎င်းသည်ဂျပန်နှင့်အလွန်နီးကပ်သောကြောင့်ကမ်းစပ်နှင့်နီးကပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Jeju ကျွန်း k- ဒရာမာအတွက်အများကြီးပေါ်လာသည်။ အဲဒါပါ အလွန်ခရီးသွား destination ည့်သည်၎င်း၏သဘာဝအလှအပနှင့်၎င်း၏ပျော့ပျောင်းသောရာသီဥတုသည်။ ရေတံခွန်များ၊ ကမ်းခြေများ၊ ကမ်းပါးများနှင့်ဂူများရှိသည်။ ယူနက်ဒူးရော့ခ်၊ Yongduam Rock၊ Jeju Folk Village ပြတိုက်၊ Yeomiji ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်၊ ၎င်း၏ရှုခင်းများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှည်ဆုံးချော်ရည်ပြွန်များရှိသည်ဟုယူနက်စကိုကထုတ်ပြန်သည်။ …။
ဤများမှာ တောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးခရီးစဉ်အတွက်ဂန္ထဝင်နေရာများ။ သူတို့ဟာတစ်ခုတည်းသောလူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုရီးယားနှင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုကိုနှစ်သက်လျှင်၊ ကုန်းတွင်းခရီးသွားခြင်း၊ ခရီးသွား places ည့်သည်နေရာများနည်းသွားခြင်း၊ လူထုများမှထွက်ခွာခြင်းနှင့်မြို့တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့သိရှိလာသည့်အရာ၏ရှုထောင့်အသစ်ကိုအမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » ဘာကိုတောင်ကိုရီးယားမှာကြည့်မလဲ